Muxuu yahay 'dhagaxa qaaliga ah' ee la sheegay in Al-Shabaab loo iibinayay? - BBC News Somali
Muxuu yahay 'dhagaxa qaaliga ah' ee la sheegay in Al-Shabaab loo iibinayay?
Dhagaxan oo aad u culus ayey dadka qaar ku tilmaameen inuu leeyahay qeybo dahab ah
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay dhagax la sheegay inuu yahay "kheyraad qaali ah" oo si "sharci darro ah" looga soo qaaday deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan.
"Kooxaha argagixisada ah waxay ka kooban yihiin qaar Soomaali iyo kuwo ajnabi ah, marka ajnabigii ayaa gartay in waxan ay yihiin wax dheef leh. Sida aan xogta ku haayo, waxay soo dirsadeen kooxo dillaaliin ah Soomaali ah, kuwaasoo ay ku dhaheen waxaad sheegataan inaad idinku leedihiin dhagaxa oo aah ka ganacsaneysaan," ayuu yiri guddoomiyaha.
"Waxaas waa naloo sheegay laakiin wax ka jiro ma laha. Caqliga saliimka ah wuxuu diidayaa in Al-Shabaab ay 260 kun oo doolar ku qaataan dhagax malaayiin doolar jooga, ayna dhahaan orda idinku dhoofsada. marka xogta aan annagu heyno waa in dhagaxaas Al-Sabaab loo iibinayo," ayuu yiri.
Dadka deegaanka ayaa "ku dagaallamay" in dhagaxaas laga qaado meesha uu muddo qarniyo ah yaallay, sida uu BBC-da u sheegay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow, oo ka mid ah mudaneyaasha baarlamaanka feredaalka ee kasoo jeeda gobolka Hiiraan.
Macdan qaali ah oo ay soo saaraan "dad gaajeysan"
Xigashada Sawirka, Dahir Jesow/Facebook
"Dadka taariikhda degmada yaqaanna markii la weydiiyay dhagaxa wuxuu ahaa mid kumannaan sano meesha yaallay, laakiin annagu wuxuu yahay ma aannaan ogeyn, mar qura ayaan aragnay iyadoo wiishash xamar ka baxay ay dhagixi qodayaan, oo dadkii deegaanka ay ku dagaalamayaan, markaas unbuu xiisihiisa kacay. Al-Shabaab ayaa loo adeegsaday dadka, labo qof ayaa ku dhimatay, odayaal kalena way ku dhaawacmeen".
Dhanka kale wuxuu xildhibaanka khalad ku tilmaamay habka lagu kala iibsaday dhagaxaas, wuxuuna yiri: "Milkiyadda wax lagu kala gatay ee khaldan waa in Al-Shabaab laga beecsaday, dadka deegaanka ayaan arrintaas noo sheegay. Kuwii soo gatayna waxay leeyihiin annaga dhagaxaan waxaan kasoo gadanay Al-Shabaab, oo noo oggolaatay".
Muxuu yahay Dhagaxa?
Inkastoo haddaba la sheegayo in lacago badan la kala siistay dhagaxa, lama oga in xaaladdu ay ku soo biyo shuban doonto "la mood noqonse weyday", oo markaas dhagaxa uuba noqdo mid aan waxba goynin.